AMISOM oo warsaxaafadeed ka soo saartay Dagaal ka dhacay Janaanle iyo Fariin ay u direen Shacabka.
Qiyaastii 9:00 subaxnimo. Juun 8, 2020, argaggixisada Al-Shabaab ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday waddo weyn oo sahaydu ku lahayd aagga Waqooyi Bari ee Janaale, ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ciidamadeenna AMISOM oo duulimaad ku jooga, hawlgallada argaggixisada iyo, nasiibdarro, qaar ka mid ah dadka rayidka ah ayaa lagu qabtay safka dabka, oo ka dhashay khasaare. Argagixisadu waxay qorsheeyeen inay weeraraan oo carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqa dadka iyo alaabada ka jirta deegaanka.
Nasiib darro, saddex haween ah ayaa ku dhintay is-rasaaseynta halka laba kalena ay ku dhaawacmeen oo hadda ay daryeel caafimaad ka helaan isbitaalka AMISOM. Waxaan jeclaan lahayn inaan ugu tacsiyeynno tacsi tiiraanyo leh iyo tacsi tiiraanyo leh u jeedinno ehelladii marxuumka waxaan u rajeyneynaa kuwa ku dhaawacmay si dhaqso leh.
“Intii aan la dagaalamay argagaxisada, waxaa naga go’an inaan ilaalino dadka iyo wadooyinka muhiimka ah ee sahayda ay argagixisadu inta badan ku aasaan IEDs ayna qarxiyaan si ay u sababi karaan cabsi. Dhacdadii Isniinta 8-dii Juun, 2020-ka waxay ahayd nasiib darro, waxaana si kal iyo laab ah u tacsi u dirayaa qoysaskii dadka dhintay ”, ayuu yiri Madaxa AMISOM, Danjire Francisco Madeira.
Wuxuu ballanqaaday in AMISOM ay kor u qaadi doonto amniga si ay u xaqiijiso xoojinta ilaalinta dadka rayidka ah.